कोशीमा उच्च बाँधको जोखिम मोलेरै जलमार्ग?
२६ चैत्र २०७४
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटवार्तापछि आयोजना गरिएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सगरमाथाको देश अब समुद्रसँग जोडिने बताए।
उनको भनाइ नेपाललाई भारतले जलमार्गमार्फत् समुद्रसम्म दिने पँहुचतर्फ लक्षित थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त वक्तव्यमा पनि भारतले नेपाललाई समुद्रसम्म पहुँच दिने सहमति भएको उल्लेख छ।
‘व्यापार तथा पारवाहन सम्झौताअन्तर्गत रहेर जलमार्गमार्फत् कार्गो ढुवानीका लागि भारतले नेपाललाई समुद्रसम्म पहुँच दिने ऐतिहासिक समझदारीमा दुई प्रधानमन्त्री सहमत छौं,’ जलमार्गसम्बन्धी संयुक्त घोषणामा भनिएको छ।
यसका लागि दुई देशबीचको व्यापार तथा पारवाहन सम्झौतामा जलमार्ग पनि थप्ने गृहकार्य गर्न दुई प्रधानमन्त्रीले सम्वन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्।
देशभरका नदीमा यातायात सञ्जाल विस्तार गर्ने महात्वाकांक्षी योजना ल्याएको भारत सरकार नेपाललाई पनि त्यही सञ्जालमा पहुँच दिन सहमत भएको हो। भारतले विश्व बैंकको सहयोगमा ५ हजार करोड भारू लागतमा आफ्ना नदीहरूमा यातायात सञ्जाल बनाउने काम गरिरहेको छ।
साढे १४ हजार किलोमिटर त्यस्तो वाटरवेज निर्माण गर्ने महात्वाकांक्षी आयोजना पनि उसले अगाडि सारेको छ। जसका लागि १० अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
भारतले अहिले पश्चिम बंगालको हल्दियाबाट उत्तर प्रदेशको बनारससम्म गंगा नदीमा जलमार्ग बनाइरहेको छ। त्यहाँ साना जहाजबाट कार्गो ओसारपसार गर्ने उसको योजना छ। नेपालले तेस्रो मुलुकबाट समान ओसारपसार गर्न अहिले कलकत्ताको हल्दिया बन्दरगाह प्रयोग गर्छ।
हल्दिया–बनारस जलमार्गको कटिया भन्ने ठाउँमा नेपालको कोशी नदी मिसिन्छ। बिहारमा पर्ने कटिया नेपाली सीमाबाट करिब १५० किलोमिटर तल छ। त्यस्तै नारायणी नदी पटना नजिकै पुगेर गंगामा मिसिन्छ।
सिद्दान्तत: यी दुई नदीको प्रयोग गरेर भारतले गंगामा बनाउँदै गरेको जलमार्गको उपयोग नेपालले गर्न सक्छ।
तर कोशी र नारायणी (भारतमा गण्डक) प्रयोग गरेर नेपालमा सामान ढुवानी गर्न कति सम्भव छ भन्ने भरपर्दो अध्ययन अहिलेसम्म भएको छैन। यो सम्भावनाको प्राविधिक पक्षसँगै, व्यवसायिक हिसाबले जलमार्ग कति फाइदाजनक हुन्छ भन्ने पनि अध्ययन हुन बाँकी नै छैन।
के साँच्चिकै भारतबाट नदीमार्फत् कार्गो नेपालसम्म ल्याउन सम्भव छ?
नेपाल फ्रेट फर्डवार्डर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष राजन शर्मा यो जलमार्गको प्राविधिक र व्यवसायिक अध्ययन नभएकोले अहिले नै यसको उपयोगिताबारे एकिनका साथ भन्न नसकिने बताउँछन्।..
हाम्रा नदीमा पानीको गहिराइ र चौडाइ, त्यसका लागि आवश्यक नहरको निर्माणजस्ता प्राविधिक पक्षको अध्ययन अनुसन्धान बिना जलमार्गको उपयोग बारेमा धेरै बोल्न सकिन्न’ शर्माले भने।
प्राविधिक रूपमा ल्याउन सम्भव भए पनि त्यसको व्यवसायिक लाभबारे पनि अध्ययन हुनु पर्ने उनको धारणा छ।
प्राविधिक अध्ययनपछि मात्रै हाम्रा नदीमा चलाउन सकिने फिडर जहाज (समुन्द्रमा आउने पानीजहाजबाट सामान ओसार्ने साना जहाज) को आकार निर्धारण हुन्छ। त्यस्तो फिडर जहाजले बोक्ने कन्टेनरको आकार र संख्या तय भएपछि मात्र व्यावसायिक लाभको बारेमा भन्न सकिने जानकारहरू बताउँछन्।